A Road To Be A AWS Certified Cloud Practitioner - Leet Developers AWSMyanmar DevOpsMyanmar
A Road To Be A AWS Certified Cloud Practitioner
ကျွန်တော့် ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး International Certificate လိုဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေ့ါလေ။ ကျွန်တော့် Professional Life ရဲ့ ပထမဆုံးစာမေးပွဲလည်းဖြစ်သလို ပထမဆုံးရခဲ့တဲ့ Certificate လို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ အမှတ်တရဖြစ်သွားတာပေ့ါဗျာ။ ထားပါတော့ ဆက်ကြမယ်…
ကျွန်တော် ကျောင်းပြီးတော့ စာတွေမှတ်ရတာ ဝေးကွာခဲ့တာတော့ တနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေ့ါလေ။ ပထမဆုံးပြန်ထိတွေ့ရတော့လည်းရင်ခုန်မိပါတယ်။ ကြောက်လည်းကြောက်နေမိတယ်။ ပထမဆုံး AWS ရဲ့ Certified Cloud Practitioner အကြောင်းလေး အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
AWS ရဲ့ အလွယ်ဆုံး Certificate လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ AWS Cloud နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Overall Knowledge ရှိထားတဲ့သူတွေ ပြီးတော့ AWS ကနေ Provide လုပ်ထားတဲ့ Services တွေအကြောင်းကို ယေဘုယျ နားလည်းထားပြီးထားတဲ့သူတွေ ဖြေနိုင်တဲ့စာမေးပွဲတခုပါပဲ။ တခုတော့ရှိတယ်ဗျ Hands-on လေးတွေတော့ရှိထားပြီးသား လူတွေဆိုပို ကောင်းပါတတယ်။ ပလိန်းကြီး ဖြေရင်တော့ အရမ်းတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။
Exam ကြေးကတော့ $100 ဖြစ်ပြီး Multiple Choice exam တခုဖြစ်ပါတယ်။ Exam code ကတော့ CLF-C01 ဖြစ်ပါတယ်။
Exam hour ကတော့ ၉၀ မိနစ် (တစ်နာရီခွဲ) ဖြစ်ပြီး မေးခွန်းစုစုပေါင်း ၆၅ ပုဒ် ဖြေရပါတယ်။ အမှတ်စုစုပေါင်းကတော့ ၁၀၀၀ ပါ အောင်မှတ်ကတော့ ၇၀၀ ဆိုရင်အောင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ၈၇၇ မှတ်ရခဲ့ပါတယ်။
နာရီဝက်အတွင်းမှာ အကုန်ပြီးနေပါပြီ ဒါတောင် အာ့လောက်ကြာအောင် အချိန်ဆွဲဖြေနေခဲ့လို့ပါ။ မသေချာတဲ့ တချို့ အဖြေမမှန်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို Flagged လုပ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါ Review ပြန်လုပ်ပြီး ပြန်ပြင်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ မေးခွန်း အကုန်လုံးကိုလည်း ပြန် Review လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Exam ကိုဘယ်ကနေ ဖြေလဲ?
ကျွန်တော့်ကို လာလာမေးကြလို့ဗျ။ Cloud Practitioner က အိမ်ကနေလည်းဖြေလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က တော့ အလုပ်ရှူပ်မှာစိုးလို့ Exam Center မှာပဲ သွားဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်နေ့မှာ ဖြေမလဲဆိုတာကို exam center ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကအသိလည်းရှိတော့ အာ့အကိုကလည်း ပြောပေးထားပါသေးတယ်။ ဖုန်းကြိုဆက် ကိုယ်ဖြေမယ့်ရက်ကိုပြောပြီး နာရီဝက်လောက် စောသွားပြီး $100 (မြန်မာပိုက်ဆံနဲ့ပေးလည်းရပါတယ်) နဲ့ Exam Center ကြေး ၁၀၀၀ ပေးပြီး ခဏအကြာမှာ ဖြေလို့ရပါတယ်။ မိမိတို့ အနေနဲ့ AWS Account ရှိထားဖို့လိုပြီး http://certmetrics.com မှာလည်းအကောင့်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့ဆို Certmetrics ကနေ Candidate id ယူပြီး exam center က အမတွေကို ပေးလိုက်ဖို့လိုလို့ပါ (ဒီ id ကနေ schedule လုပ်ပေးရလို့ပါ)
အောက်မှာ ဘယ် Domain တွေ Cover ဖြစ်အောင် လေ့လာထားရမလဲဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ % ကတော့ မေးခွန်းမှာ ဘယ်လောက်မေးထားတယ်ဆိုတာကို ပြောတာပါ
Domain 1 : Cloud Concepts မှာ ဘာတွေ နားလည်ထားရမလဲဆိုတော့-
AWS Cloud ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမျိုးသူ့ရဲ့ တန်ဖိုးတွေက ဘာတွေလဲ ၊ AWS Cloud Economies နဲ့ပတ်သတ်တာမျိုးတွေ နောက်ပြီး အမျိုးမျိုးသော cloud architecture design principles တွေကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ( ဥပမာ- Well architect framework မှာ ဘာတွေ ပါမလဲ? Cloud ရဲ့ Benefits တွေက ဘာလဲ? စသည်ဖြင့် မေးတတ်ပါတယ်)
အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ပတ်သတ်တာမျိုးတွေ မေးပါတယ်။
Domain2: Security မှာတော့ –
AWS Shared Responsibility model တွေကို ကောင်းကောင်း နားလည်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ၊ AWS Cloud ရဲ့ security and compliance concepts တွေကို နားလည်ထားရပါမယ် သိထားရပါမယ် ၊ Access Management နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေကိုလည်း သိထားရပါမယ် ၊ နောက်ပြီးတော့ Security Support နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Resources တွေကို ဘယ်ကနေ ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေ နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဗျ ( ဥပမာ- Security Report တွေကို ဘယ်နားမှာသွားဖတ်လို့ရမလဲ? ကိုယ့် Services တခုခုမှာ incident တခုခုဖြစ်တယ်ဆို ဘယ် Team ကို ဆက်သွယ်ရမလဲ? စသည်ဖြင့်ပေ့ါဗျာ)
Domain3: Technology မှာဆိုရင်တော့ –
AWS မှာ ဘယ်လို Deployment methods တွေ Operation methods တွေသုံးလို့ရလည်းဆိုတာ မျိုးတွေ ၊ Instance type တွေအကြောင်းတွေ AWS Global Infrastructure အကြောင်းတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့ရယ် ၊ AWS ရဲ့ Core Services တွေအကြောင်းကို တော်တော်များများသိထားဖို့ရယ် ၊ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး support လုပ်တဲ့ resources တွေ အကြောင်းတွေ ကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ (ဥပမာ- long term application ဆို ဘယ် instance payment options ကိုသုံးမလဲ? AWS Regions ဆိုတာဘာလဲ? စသည်ဖြင့်ပေ့ါ)
Domain 4: Billing & Pricing မှာကတော့ –
AWS ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော Pricing Models တွေကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် ၊ Billing & Pricing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အမျိုးမျိုးသော accounts တွေရဲ့ structure တွေအကြောင်းသိထားရပါမယ် ၊ Billing Support နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ resources တွေအကြောင်းသိဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ AWS Support Plan တွေအကြောင်း တွေလည်းနားလည်ထားရပါမယ်။ (ဥပမာ- Consolidated Billing ဆိုတာဘာလဲ? AWS Organization Account မှာဘာတွပါလဲ? စသည်ဖြင့်ပေ့ါ)
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သဘောတရားလေး နည်းနည်းပေါက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောထားတာတွေက အကြမ်းဖျဥ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်နက်နဲတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ နောက်ပို့စ်တခုမှာ Learning Path ကို ပြောပြပါအုံးမယ်။ စာတွေရေးထားတာလည်း များနေပြီမို့ ဒီနေရာမှာပဲ ခဏလောက် ရပ်ခွင့်ပြုပါ။ အားလုံး အဆင်ပြေကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Users Viewed This Post: 572